तपाईको श्रीमान श्रीमती बिच झगडा भैरहन्छ भने कारण यस्तो हुन सक्छ - Lekbesi Khabar
तपाईको श्रीमान श्रीमती बिच झगडा भैरहन्छ भने कारण यस्तो हुन सक्छ
डा. सि पी सेडाई
घमण्डी बन्ने, बढी फुर्ती लगाई कुरा गर्ने ।
२/३ घण्टा सुते पनि निद्रा पुग्ने ।
यौनमा बढी रुचि हुने । एउटा काम शुरु गर्न नपाउदै अर्को थाल्ने वा छटपट हुने ।
यो रोग एकपटक शुरु भए पटि अर्को पटक दोहोरिने समस्या रहन्छ । त्यसैले यसलाई जटिल मानसिक रोग मानिन्छ । अर्को पटक दोहरिदा कहिले पहिलेकै लक्षणहरु दोहोरिन्छन् त कहिले उल्टो खालको वा डिप्रेसन हुने जस्तै दिक्क हुने रुने मछर्’ भन्ने, राती निदाउन गाहो हुने देखिन्छ । यो रोग पटक पटक दोहोरिने भएकोले यो रोग बारे राम्रो जानकारी हुनु अति आवश्यक छ ।
दैनिक जिवनमा काम गदै जाँदा कहिले सफल भइन्छ तर कहिले असफल भइन्छ । असफल भएको कारणले हतास हुनु हुदैन बरु असफलताको कारण के छ त्यो पत्ता लगाई सफलताको बाटोमा फेरी अगाडी बढ्नु पर्छ । निराश हुनु हुदैन । अरुसगँ पनि सररल्लाह लिनु पर्छ । कहिले काँही हाम्रो अगाडी समस्या नै समस्या र्र्तेिर्सएर बसेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आत्तिनु हुदैन । कतिपय समस्या आफैपनि समाधान भएर जान्छन । ३,४ महिनामा आउने समास्यालाई लिएर अहिले देखिनै चिन्तित हुनु हुदैन । बरु देखिएका समस्यालनई एउटा योजना बनाई यो पछि यो गर्छु भनि अधि बढ्नु पर्छ ।
समाजमा कोही मानिस अतिनै नैतिक हुन्छन यस्ता मानिस हरेक काममा अतिनै सचेत हुन्छन अरुलाई कुनै प्रकारको मर्का नपरोस भनि हरेक क्षणमा ध्यान पुर्याउछन् तर समाज त्यस्तो छैन र समाजबाट यस्ता मानिसले धोका पाउँछन् र मन दुखाउन पुग्छन । मनोरोग लाग्न पुग्छ त्यसैले हामी केहि हद सम्म तलमाथि हुनु पर्ने हुन्छ न कि हरेक कुरा अत्यान्तै ठिक संग चल्नपर्छ,मानिस अनुसार नै हुन पर्छ । केहि मानिसलाइ आफूले गरेको बाहेक अरुले गरेको काममा चित्त बुझ्दैन । त्यसैले यस्ता मानिस आरुले गरेको काम सच्याउने गर्छन जस्तै कोठा सफा गरेको मन नर्पर्ने, आफैले सफा गर्नु पर्ने। यस्तो हुदा दैनिक जिवनमा अफ्ठ्यारो महसुस हुन्छ । त्यसैले केहि हदसम्म अर्काले गरेको कामलाई पनि अचित स्थान दिनु पर्ने हुन्छ । समाजमा अति नैतिकभई बाच्न गाह्रो छ त्यसैले आफु पनि परिवर्तन हुनपर्छ र समाज अनुसार चल्नु पर्छ ।
डा. सि पी सेडाई , नशा तथा मनोरोग बिशेषज्ञ हुन् ।
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:४९ November 16, 2018
सेक्सको संबन्धमा रहेका रोचक र आश्चर्यकुराहरु